दिव्य गिरी5 लेखहरु0comments
दिव्य गिरी ७ श्रावण २०७८ १९:०९ 0
यहाँ दुधले नुहाएर आएको कोही छैन मंगल धुन सुनाएर आएको कोही छैन ।आज चारैतिर असुरक्षाको हाहाकार छ शान्ति-गीत गुन्गुनाएर आएको कोही छैन ।हरबखत अनुहारमा उदासीपन छ आँखामा गुराँस फुलाएर आएको कोही छैन ।जाली, झेली र…
दिव्य गिरी २३ मंसिर २०७७ १३:४६ 0
तीन वटा घर एकै लहरमा बनेका थिए। ती घरहरु लगभग दस वर्षको अन्तरालमा बनेका थिए। घर त अरु पनि थिए तर टोलमा ती घर मात्र चर्चामा थिए।मान्छेहरु सडकमा हिंड्दा ती तीन वटै घरलाई हेर्थे। किन हेर्थे भने देख्दा अस्वाभाविक थिए। पहिलो घर साह्रै…
दिव्य गिरी १७ मंसिर २०७७ १०:०९ 0
पशुपंक्षी, कीटपतङ्ग, भुसुनासम्म पनि यौन–जागरण यौनिकताका कारण राम्ररी चलेका छन् । मनुष्य सचेत वर्ग भएकाले त्यो यौनभाव राम्ररी भनुभूत गर्दछ ।
दिव्य गिरी ७ आश्विन २०७७ २१:१६ 0
ऊ छोरोलाई तेल घसिरहेकी थिई । बच्चा भर्खर छ महिना पुगेको थियो । मखमली पनि आएर छेउमै बसी । आज नेपाल बन्द भएकोले ऊ काममा जान सकेकी थिइन । उसले भनी, ‘दिदी यो बाबुको नाक अली चुच्चो रहेछ ।’मखमलीको कुरा सुनेर उसले मखमलीतिर कर्के नजरले…
दिव्य गिरी १६ श्रावण २०७७ १५:१० 0
१. हिजो–आज सबैलाई कालापानी दुखेको छ छिमेकीले हाम्रो गरेको मानहानी दुखेको छ ठूलोले सानामाथि थिचोमिचो गर्नु हुँदैन हाम्रो मनमा मित्र कै बेइमानी दुखेको छ ।।२. म दिनदिनै सीमाना हराएको खबर पढिरहेछु म दिनदिनै मन्त्रि…